China Cable Phosphatized Steel Wire for Optical Fibre Cable Ukuqinisa ifektri kanye nabaphakeli | UMHLABA OMUNYE
Phosphatized Steel Wire for Optical Fibre Ikhebula Ukuqinisa
Imigomo Yokukhokha T / T, L / C, D / P, njll.
Isikhathi sokuthumela Izinsuku ezingama-20
Ichweba Lokulayisha IShanghai, iChina
Ikhodi ye-HS 7229909000
Ukupakisha Ibhokisi noma lokhuni ibhokisi, 50kg / iphakethe noma ngokuvumelana nemfuneko iklayenti
I-phosphatized steel wire for optical fiber cable yenziwa ngezinduku zekhabhoni zensimbi ezisezingeni eliphakeme ngochungechunge lwezinqubo ezinjengokudweba okunzima, ukwelashwa kokushisa, ukutomula, ukuwasha, i-phosphating, ukomisa, ukudweba nokuthatha, njll.
Intambo yensimbi ene-phosphorized ingenye yezinto eziyisisekelo ezisetshenziselwa ukuxhumana nezintambo ezibonakalayo. Ingavikela i-fiber ebonakalayo ekugoqeni, ekusekeleni nasekuqiniseni amathambo, azuzisayo ekwakhiweni, ekugcineni nasekuthuthweni kwezintambo ezibonakalayo nokubekwa kolayini bekhebula le-optical, futhi inekhwalithi yekhebula ye-optical ezinzile, inciphisa ukuncishiswa kwesiginali nezinye izici.
Intambo yensimbi esetshenziswe emgodini wekhebula elibonakalayo isuse indawo yensimbi yensimbi esetshenzisiwe esikhathini esedlule ngocingo lwensimbi olubunjiwe, futhi ikhwalithi yayo ithinta ngqo impilo yekhebula elibonakalayo. Ukusetshenziswa kocingo lwensimbi olubunjiwe ngeke kusetshenziselwe amakhemikhali nefutha ekhebula le-optical ukucwilisa i-hydrogen futhi ikhiqize ukulahleka kwe-hydrogen, okungaqinisekisa ukuxhumana okuphezulu kwe-fiber fiber.
I-phosphatized steel wire yekhebula le-optical esilinikezayo linezici ezilandelayo:
1) Ubuso bushelelezi futhi buhlanzekile, abunazici ezifana nemifantu, izigaxa, ameva, ukugqwala, ukugoba nezibazi, njll;
2) Ifilimu ye-phosphating iyunifomu, iyaqhubeka, iyakhanya futhi ayiwi;
I-3) Ukubukeka kuyindilinga ngosayizi ozinzile, amandla aphezulu wokuqina, i-modulus enkulu nokunwebeka.
Isetshenziswa njengokuqinisa okuphakathi kwensimbi kwezintambo zokuxhumana zangaphandle.
Ububanzi bokuzisholo (mm)
Ubuncane. amandla aqinile (N/ mm2)
Ubuncane. isisindo sefilimu ye-phosphating (g/ m2)
Imodi eguqukayo (Ayikho / mm2)
Ukunwebeka okusalile (%)
Qaphela: Ngaphezu kokucacisiwe kuthebula elingenhla, singaphinde futhi sinikeze izintambo zensimbi ezinamakhemikhali nokunye ukucaciswa namandla aqinile wokuqina ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
1) Kufanele igcinwe endaweni yokugcina impahla ehlanzekile, enomoya futhi eyomile;
2) Isendlalelo esingezansi sesayithi lokugcina umkhiqizo kufanele sifakwe ngezinto zokuqinisekisa umswakama ukuvimbela ukubola;
3) Kufanele ivikelwe ekucindezelekeni okusindayo, ekushayweni nakomunye umonakalo owenziwa ngemishini ngesikhathi sokugcinwa nokuhamba
Langaphambilini Lashukumisa Steel Wire ngoba Ikhebula Stranding
Olandelayo: Ithebula le-Polyester Glass Fibre
Q1: Singakwazi ukuvakashela inkampani yakho?
IMP: silindele ukufika kwakho futhi sizokuhola ukuthi uvakashele imboni yethu.
Q2: Ngingashesha kanjani ukuthola ikhotheshini?
A: Sivame ukucaphuna kungakapheli amahora angama-24 ngezinto ezijwayelekile zekhebula ngemuva kokuthola umbuzo wakho. Uma uphuthuma kakhulu ukuthola intengo, sicela usishayele noma usitshele ku-imeyili yakho ukuze sizokubheka phambili ukubuza kwakho.
Q3: Iyini imigomo yakho yokupakisha?
A: Isigubhu sokhuni, i-plywood pallet, ibhokisi lokhuni, ibhokisi elingezinketho, kuncike ezintweni ezahlukahlukene noma izidingo zamakhasimende.
A: T / T, L / C, D / P, njll. Sizokukhombisa izithombe zemikhiqizo namaphakeji ngaphambi kokukhokha ibhalansi.
Q5: Iyini imigomo yakho yokulethwa?
A: I-EXW, i-FOB, i-CFR, i-CIF. Ungakhetha eyodwa elula kakhulu noma ebiza kakhulu kuwe.
Q6: Kuthiwani ngesikhathi sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile, kuzothatha izinsuku ezi-7 kuya kwezingu-15 ngemuva kokuthola inkokhelo yakho kusengaphambili. Isikhathi esithile sokulethwa sincike ezintweni nobuningi be-oda lakho.
Q7: Iyini inqubomgomo yakho yesampula?
A: Isampula yokuhlolwa kwakho iyatholakala, Sicela uxhumane nokuthengisa kwethu ukusebenzisa isampula yamahhala.
I-Q9: Ingabe unikezela zonke izinto zekhebula ngokusho kwezintambo esizikhiqizayo?
A: Yebo, singakwazi. Sinochwepheshe kwezobuchwepheshe bokukhiqiza obenza umsebenzi wokuhlaziya ukwakheka kwekhebula ukuze babhale zonke izinto ozidingayo.
Q10: Iyini imigomo yebhizinisi lakho?
A: Ukuhlanganisa izinsizakusebenza. Ukusiza amakhasimende ukuthi akhethe izinto ezifanele KAKHULU, okonga izindleko nokwenza ngcono ikhwalithi.
Inzuzo encane kepha inzuzo esheshayo: Ukusiza izintambo zamakhasimende ziqhudelane kakhulu emakethe futhi zikhule ngokushesha.
Phosphated Steel Wire Ukuze Ikhebula Optical
Phosphated Steel Wire Ukuze Optical Ikhebula Ukuqinisa
Hot bacwilisa lashukumisa Steel Wire Cable Armoring
Ntambo Aramid ngoba Wire futhi Ikhebula, Optical Fibre Ikhebula Bundle
I-Fiber Reinforced Plastic (FRP) Izinduku ze-Optical Fibre Cable